Dhaqdhaqaaqayaasha MRC waxay bilaabeen barkad abaalmarin lagu iibsado bas ku taal Mauritius Kamto - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Xagjiriinta MRC waxay soo saaraan dheri ay ku iibsadaan bas u raacda Maurice Kamto
Dhaqdhaqaaqayaasha MRC waxay bilaabeen barkad abaalmarin lagu iibsanayo bas ku taal Mauritius Kamto
Waa xaqiiq aan waligeed laga arkin Siyaasadda, xagjiriinta urur siyaasadeed siyaasadeed oo Kameriyaan ah oo bas ka iibsanaya madaxweynahooda.
Waxay dhamaantood bilaabeen ka dib dhacdada Buca Voyages, oo ah hay'ad safar oo dib ugu celisay dadka u ololeeya Mouvement Pour la Renaissance ee Cameroon.Sidaa darteed, taageerayaasha xisbigan siyaasiga ah waxay go’aansadeen inay bilaabaan xirmo toos ah oo internetka ah. inay u iibsadaan bas loogu talagalay xafladda si looga hortago dhibaatooyinkan.
Halkan waxaa ah boostada loogu yeerayo mintidiinta MRC in ay gacan ka geystaan ​​iibsiga baska.
Walaalayaal sharafta leh, in kabadan hal sano, waxaan joognaa goobaha dhismaha ee iska caabinta dib u dhalashada Cameroon. Madaxa mashruucan waxaa leh milkiilaha mashruuca, Maurice Kamto, madaxweynaha la soo doortay iyo ururkiisa siyaasadeed, Dhaqdhaqaaqa Renaissance ee Cameroon (MRC).
4 Noofambar 2019, xagjiriinta MRC - Douala si xoog leh ayaa looga soo eryay bas ka mid ah wakaaladda gaadiidka BUCAVOYAGES inta ay aado Yaoundé si ay ula kulmaan madaxweynaha la doortay Maurice Kamto. Iyadoo la raacayo ficilkan midab-kala-sooca ah iyo dastuuriga ah, waxaan go'aansanay inaan u iibsano bas loogu talagalay MRC si markaa, mar dambe, xagjiriinta xisbiga Maurice Kamto, madaxweynaha la doortay, ayaa mar labaad dhibanayaal u ah falalka wax u dhimaya Sharafta ay ku muujinayaan ka go'naanta iska caabinta qaran.
Halganka dib-u-dhalashada wuxuu maraa dhismaha madax-bannaanideena. Waxyaalaha iyo madaxbannaanida saadka. Siinta baska xafladaha Maurice Kamto, waa in la xoojiyo awooda howl galka iyo abaabulka dhulka, laakiin sidoo kale waxaa isaga loogu talagalay inuu ku celiyo dhammaan jacaylkii iyo kalgacalkii aan u galnay halganka uu ugu jiro isbedelka Cameroon .
Ka dib markii si sharci darro ah loogu haystay muddo sagaal bilood ah dalka Cameroon, Maurice Kamto, madaxweynaha la doortay, waxaa soo baxay xitaa in ka sii go'an oo ka soo baxay xukunnadii xukunka ee Yaoundé. U soo bandhig Maurice Kamto iyo ururkiisa MRC hadiyad ahaan astaan ​​u ahaanshaha aqoonsi dhammaan dadaalkooda ku aaddan xoreynta Cameroon. Sii Maurice Kamto baska u oggolaanaya inuu u diyaariyo xitaa si ka xasilan dagaallada siyaasadeed ee soo socda. Sababtoo ah dagaalka lagula jiro khaliijka ayaa noqon doona mid dheer oo xanuun badan. Sidaas awgeed, hoggaamiyeheenna, madaxweynaha la doortay, wuxuu u baahan yahay inuu ogaado inuu had iyo jeer innaga nagu tiri karo. Ujeeddo 30 000 euro. Tontinards ka adduunka oo dhan, tontinons.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.ocameroun.info/57359-les-militants-du-mrc-lancent-une-cagnotte-pour-acheter-un-bus-a-maurice-kamto.html
Tuniisiya: Ennahdha waxay u soo jeedisay Rather Ghannouchi inuu noqdo madaxweynaha baarlamaanka - JeuneAfrique.com
Guinea: Gudiga doorashada ayaa ku dhawaaqay taariikhda cusub ee doorashooyinka sharci dajinta - JeuneAfrique.com